Suuriya :Mareykanka oo dilay hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Militariga Mareykanka ayaa dilay Cabdul Xamiid Al-Matar oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsanaa Al-Qaacida, kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Siiriya, sida uu sheegay afhayeenka taliska dhexe ee Mareykanka.
Duqayntan ayaa imanaysa laba maalmood ka dib markii la tilmaamay in kooxda Al-qaacida ay weerareen fariisin mileteri oo Maraykanku ku lahaa koonfurta dalka Suuriya.
Ma jiro khasaare kale oo la ogyahay oo ka dhashay duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Droniska ayuu yiri Afhayeen u hadlay Pemtagoonka , isaga oo intaas ku daray in la adeegsaday diyaarad nuuceedu yahay MQ-9.
Bishii Sebtembar, Pentagon-ka ayaa sidoo kale weerar ku qaaday waqooyi-galbeed Suuriya oo ay maamulaan kooxaha fallaagadu, waxaana lagu dilay hoggaamiye kale oo sare oo ka tirsan Al-Qaacida, kaas oo lagu magacaabi jiray Salim Abu-Ahmad.
Inkastoo colaadaha ka ujira Siiriya ay dhaliyeen dagaallo adag oo ay ku lug leeyihiin ciidamo shisheeye, maleeshiyaad iyo kooxo hubeysan oo ku xiran al-Qaacida iyo Daacish,haddana, qeybo badan oo ka mid ah Idlib iyo Aleppo waxay weli ku jiraan gacanta mucaaradka hubeysan ee Suuriya,
Previous articleGuddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo Galmudug ugu baaqay inay dhameystiraan xubnaha ka harsan Aqalka Sare
Next articleCiidamada Xoogga dalka oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan argagixisada Al-Shabaab